Akụkọ - Kedu ka ogologo ntụgharị si emetụta nsonaazụ nhazi 3D
Akụkọ ụlọ ọrụ Rainpoo tech
Kedu otu ogologo ogologo si emetụta nsonaazụ 3D
1 、 Okwu Mmalite
Maka eserese foto, enwere ọnọdụ anọ dị ike iji wuo ụdị 3D:
Igwe na-enwu enyo nke na-enweghị ike igosipụta ezigbo ozi ederede nke ihe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, elu mmiri, iko, nnukwu mpaghara otu ụlọ elu ederede.
Ihe na-eji nwayọọ nwayọọ. Dịka ọmụmaatụ, ụgbọ ala na nkwụsị
Mpaghara ebe njirimara-enweghị ike ijikọta ma ọ bụ ihe njirimara-ihe metụtara nwere nnukwu njehie, dịka osisi na ohia.
Oghere ụlọ dị mgbagwoju anya. Dị ka nchekwa, ntọala, ụlọ elu, wires, wdg.
Maka ụdị 1 na 2, n'agbanyeghị etu esi emeziwanye data mbụ, ụdị 3D agaghị emeziwanye.
Maka ụdị nke 3 na ụdị 4, na arụmọrụ arụmọrụ, ị nwere ike melite ogo ụdị 3D site na imezi mkpebi ahụ, mana ọ ka dị mfe ịnweta oghere na oghere na ụdị ahụ, yana arụmọrụ ya ga-adị oke ala.
Na mgbakwunye na ihe ngosi pụrụ iche dị n'elu, na usoro ịme ngosi 3D, ihe anyị na-etinyekwu uche bụ ụdị ụdị 3D nke ụlọ ndị ahụ. N'ihi nsogbu ndị metụtara ntọala ụgbọ elu ọnọdụ, ọnọdụ ọkụ, akụrụngwa nnweta data, sọftụwia ihe atụ 3D, wdg, ọ dịkwa mfe ime ka ụlọ ahụ gosipụta: ghosting, ịbịaru, agbaze, dislocation, deformation, adhesion, wdg. .
N'ezie, n'elu-e kwuru nsogbu nwekwara ike-mma site 3D nlereanya-gbanwee. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụ ọrụ mgbanwe nnukwu ihe atụ, ọnụ ahịa ego na oge ga-adị oke.
Modeldị 3D tupu mgbanwe
Ihe nlereanya 3D mgbe emezigharị
Dịka onye nrụpụta R & D nke eserese oblique, Rainpoo na-eche n'echiche nke nchịkọta data:
Etu esi chepụta igwefoto oblique iji meziwanye ogo nke ihe nlereanya 3D na-enweghị ịbawanye ụba nke ụzọ ụgbọ elu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ foto?
2, Gịnị bụ Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo
Ogologo anya nke oghere bụ oke ihe dị mkpa .Ọ na-ekpebi nha nke isiokwu dị na ọkara onyonyo, nke dabara nha nke ihe na ihe onyonyo ahụ. Mgbe ị na-eji igwefoto dijitalụ (DSC), ihe mmetụta kachasị bụ CCD na CMOS. Mgbe ejiri DSC mee ihe na mbara igwe, ebe elekere anya na - achọpụta ihe nlele nke ala (GSD).
Mgbe ị na-agba otu ebumnuche ahụ n'otu anya, jiri oghere nwere ogologo elekere anya, ihe oyiyi nke ihe a buru ibu, oghere nke nwere obere elekere dị obere.
Ogologo oge ha na-ekpebi ogo ihe dị na onyonyo, nkiri nlele, omimi nke ubi na etu eserese ahụ dị. Dabere na ngwa ahụ, isi ihe dị na ntanetị nwere ike ịdị iche iche, sitere na mm ole na ole ruo mita ole na ole. Ohaneze, maka foto ikuku, anyị na-ahọrọ, anyị na-ahọrọ ogologo oge dị na nso nke 20mm ~ 100mm.
3 Gịnị bụ FOV
Na oghere anya, akuku nke etolite site na etiti nke oghere dị ka elu na oke kachasị nke ihe oyiyi nke ihe nwere ike ịgafe site na oghere ka a na-akpọ nkuku nke anya. Ibu FOV, nke ka ntakịrị nhụ anya. Na usoro, ma ọ bụrụ na lekwasịrị anya ihe adịghị n'ime FOV ìhè gosipụtara ma ọ bụ emit site na ihe agaghị abanye oghere na ihe oyiyi na-agaghị guzobere.
4, nchoputa ogologo & FOV
N'ihi na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo nke oblique igwefoto, e nwere abụọ nkịtị nghọtahie:
1) Ogologo oge ha dị ogologo, nke dị elu dị elu nke ụgbọ elu drones, na nnukwu mpaghara nke ihe oyiyi ahụ nwere ike ikpuchi;
2) Ogologo oge dị ogologo, ogologo nke mkpuchi ahụ na nke ka elu ịrụ ọrụ arụmọrụ;
Ihe kpatara nghọtahie abụọ a dị n'elu bụ na ejikọtaghị njikọ dị n'etiti ogologo oge na FOV. Njikọ dị n’etiti ha abụọ bụ: ogologo oge hiwere isi, obere FOV; na mkpumkpu na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo, nke ka na FOV.
Ya mere, mgbe oke anụ ahụ nke etiti ahụ, mkpebi ahụ, na mkpebi data dị otu, ngbanwe nke ogologo oge ga-agbanwe elu nke ụgbọ elu ahụ, ebe a na-agbanweghị na ihe oyiyi ahụ.
5, si nọọrọ ogologo & Arụ ọrụ arụmọrụ
Mgbe ị ghọtara njikọ dị n'etiti ogologo oge na FOV, ị nwere ike iche na ogologo nke isi ogologo adịghị enwe mmetụta na arụmọrụ ụgbọ elu. Maka Ortho-fotommetry, ọ bụ nke ziri ezi (na-ekwu okwu, ogologo oge mgbado anya, nke ka elu elu ụgbọ elu, ike ọ na-ewe karịa, ọ nwere obere oge ụgbọ elu yana obere arụmọrụ arụmọrụ).
Maka oblique foto, ogologo ndị Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo, ala na-arụ ọrụ arụmọrụ.
A na-etinye oghere igwefoto nke igwefoto na akụkụ nke 45 Celsius, iji jide n'aka na anakọtara data onyonyo nke ihu ihu nke ebe ezubere iche, ụzọ ụgbọ elu kwesịrị ịgbasa.
Ebe ọ bụ na agbafere oghere na 45 Celsius, a ga-akpụzi triangle ziri ezi nke isosceles. N'iburu n'uche na a naghị echebara echiche ụgbọ elu ndị a na-adịghị anya echiche, a na-ewere isi ihe nyocha nke oghere anya dị n'akụkụ ọnụ mpaghara ebe a na-achọ atụmatụ ụzọ, mgbe ahụ ụzọ drone na-agbasa ogologo EQUAL ruo elu ụgbọ elu nke drone .
Yabụ ọ bụrụ na mpaghara mkpuchi ụzọ adịghị agbanwe agbanwe, mpaghara ọrụ na-arụ ọrụ nke obere elekere mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ karịa nke elekere ogologo.
Nke gara aga ：Kedu otu njikwa akara na data PPK si emetụta usoro 3D dabara adaba
Osote:Kedu otu ụdị GSD na ụdị ụgbọelu ndị na-ebu ụgbọ mmiri si emetụta usoro 3D dabara adaba